Banyere Anyị - Hebei Baisite Prosthetic Orthotic Technology Co., Ltd.
Hebei Baisite Prosthetic Orthotic Technology Co.,Ltd. bụ ọkachamara emeputa na prosthetic na orthotic akụkụ .Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere: prosthetic nkwụnye,prosthetic ikpere nkwonkwo, hip nkwonkwo, prosthetic ụkwụ, myo elctric aka, ịchọ mma aka, prosthetic ngwá ọrụ / ihe, Orthotics
Anyị nwere elu na ọkachamara n'ichepụta ngwá, magburu onwe nnyocha na mmepe engineer, na elu-edu jikwaament na otu ahụmahụ mmepụta ihe.
Anyị nwere ụlọ ọrụ nkedo nke onwe anyị, ụlọ ọrụ igwe CNC, Mgbakọta ogbako na Nchọpụta Nkà na ụzụ na Center Development. niile nke ngwaahịa Kere na mere n'onwe anyị, anyị nwere ike ijikwa ọnụ price nke ọma! Ya mere, anyị nwere ike ịnye gị àgwà kachasị mma, ọnụahịa kacha mma na ọrụ ahịa mgbe ọ gasịrị. Ụkpụrụ anyị bụ: Kasị mma maka gị!
Anyị enwetala Asambodo CE maka njikwa mma yana asambodo njikwa njikwa yana ISO 13485 Asambodo ire ere n'ahịa. na dechara aha nchịkwa nri na ọgwụ ndị China.
Ugbu a ngwaahịa anyị erewo ihe karịrị mba 50, dị ka Ameriacan, Germany, Mexico, Egypt, Thailand, Kenya, India, Myanmar, Iran, Iraq, Syria wdg.
Anyị factory nwere ihe karịrị 10 afọ n'ichepụta experience.We na-aga n'ihu na mgbalị anyị na innovating enweghị ihe ọ bụla stagnation, ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa izute mkpa dị iche iche maka ndị ahịa anyị, ebumnuche anyị bụ na-enye ọzọ ọkaibe technology, ọzọ humane imewe na ndị ọzọ na-echebara ọrụ iji merie ntụkwasị obi nke ndị ahịa. na nkwado, na-enye onyinye n'ụwa, nabata ndị enyi niile ka ha gaa, ma guzobe mmekọrịta azụmahịa ogologo oge na anyị maka ọdịnihu dị mma.
Anyị na-emeghe echiche ọhụrụ, ntụnye na arịrịọ pụrụ iche. Anyị na-anabata ohere iji soro ndị dọkịta na-awa ahụ, ndị dọkịta na-awa ahụ, na ndị bepụ aka rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịrụkọ ọrụ ọnụ ma ọ bụ ikpe pụrụ iche ịchọrọ enyemaka, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị.
Ụlọ ọrụ anyị na-ekwusi ike mgbe niile na ịlanarị site na ịdị mma ma na-eme ka ọhụụ ọhụrụ na njikwa na nkà na ụzụ mgbe niile, anyị eguzobewokwa usoro nchịkwa sayensị dị mma na usoro mmesi obi ike. Anyị kwenyesiri ike na anyị ga-enwekwu ọdịnihu na-ekwe nkwa.